Dhaloonni haaraan mo'atee waan ba'e fakkaata-Obbo Gabruu G/Maariyaam - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright OPDO
Goodayyaa suuraa Hasxaa DHDUO
Mootummaan Naannoo Oromiyaa haaromsa jalqabame ciminiin itti fufsiisuu kan dandeessisu jedhame hoggantoota haarawaa muudeera. Ar'as Ministirri Muummee Dr. Abiyyis kaabinee isa waliin waadaa inni haasawaa isaatiin biyyaafi uummataaf waadaa gale tumsu jedhan filachuutti jira. Kun ergaa maalii qaba laa
Siyaasa keessatti buleessa kan ta'an Obbo Gabiruu Gabiramariyaamiin muudama hoggantoota haarawaa haala amma kana keessatti ilaalcha siyaasaa maal agarsiisu akka qabu BBC'n gaafateera. "Dhugaa dubbachudhaaf ajajamanii hojjechaa turan. Oomaa waanti waldhoksinu hin jiru," jedhuun eegalan.
Obbo Gabiruun, ajajaan ergamanii ammoo biyya bulchuun hin danda'amu jedhanii, "Akkuma Obbo Lammaan irra deeddeebiyanii dubbatan, 'Kanaan booda ajajamnee biyya hin bulchinu' isa jedhan ani itti gammadeera," irra deebiyanii yaadatu.
Akkuma seeraafi heera biyya kanaatti naannoof kennamee sanaan naannoon sirriitti aangoo ofiin of bulchuu hojjiirra oolchuudha, jedhan Obbo Gabiruun. Yoo sun hin hojjetu ta'emmoo jedhan, akka fedhaan haa godhanii itti dhiisuudha. "Kana taanaanis Oromoon miliyoonni 50 kana waan godhu hin dhabu waan ta'eef."
Obbo Gabiruun kan jedhan, yoo isaan seeraafi heera duukaa bu'anii hojjetan Oromoon isaan duukaa jira. Kanas qabatamatti agarsiiseera.
Yeroo darbe simannaa Ministira Muummichaa Amboorratti ta'e deemanii hirmaatanii kan turan Obbo Gabiruun waan taajjaban dubbatu. Erga Ministirri Muumichaa deemanii bakka abbootiin fardaa walitti qabanii jiran tokkotti goruun maal akka isaan jedhan dhaggeeffachuun miira namootaas akka hubatan dubbatu.
"Yoo waadaa gale kana hojiitti hin jijjiiru ta'e akkuma kana fardeen keenyaan itti yaana jedhu. Tarkjaanfiin barbaachisu qabatamaatti hin fudhatamu taanaan, keessattuu yeroo ammaa kana hidhaafi ajjeechaan Oromiyaa keessatti itti fufeera. Muudama isaa [tuffachuuf] waan godhaa jiran natti fakkaata warri Komaandi Postiin," jechuun ibsu Obbo Gabiruun.
Muudamni hoggantoota haarawaa Naannoo Oromiyaatti ta'e kun rakkoo bulchiinsa gaaruu furuuf, tajaajila gaarii kennuuf, sadakaa federaalaatti gahee qabaachuuf, akkasumas dubartootaafi dargaggoota gara aangootti fiduuf xiyyeeffannaan kan hojjetamedha jedhama.
Kana waliin walqabatee, kun ADWUI adeemsa isaa jijjiireera kan jechisiisudha jettanii yaadduu gaaffii jedhuuf, Obbo Gabiruun ADWUI keessa seenaa ilaaluu baadhus wallaansoon akka jiru ni mullisa jedhan. "Dhaloonni haarawwaan mo'atee waan ba'e fakkaata waan barbaade ta'us."
Akka Obbo Gabiruutti, isa hanga ammaa DHDUO'n uummata saamsisaafi ficcisiisaa ture dhaabbachuu qaba yoo naannoon haala seeraafi heeraatiin of bulcha ta'e. Namoonni amma gara aangootti dhufan kun ADWUI keessa warruma turanidha. Garuu ajajamaa turan.
Amma sammuu isaanii jijjiiranii, kan duraan barameefi bakka qabate itti fufa (Status quo) isa jedhu dhiisanii haala qabatamaan jijjiirame kana waliin deemuu yoo danda'an egaa DHDUO'n of jijjiiraa jira jechuun ni danda'am, jechuun ibsan.
Haata'u malee, achi keessa dhufanii akkuma duriitti itti fufna yoo jedhan, dhamaatii Obbo Lammaafi Dr. Abiyifaa taasisaa turan gaadi'uudha jedhu Obbo Gabiruun.
Akka ilaalcha isaaniitti, Mootummaan Naannoo Oromiyaa dubartoota gara aangootti fiduunis gaariidha, waan barbaadamudhas.
Ar'as Ministirri Muummeen Dr. Abiy kaabinee haarawaasaa gurmeeffachuutti waan jiraniif, namoota akkamii ta'u jettanii yaaddu kan jedhuuf Obbo Gabiruun warra isaan waliin ta'anii waadaa isaan uummataafi biyya kanaaf galan fiixaan baasuuf tumsan filatu jedheen yaada jedhan.
"Mootummaa federaalaafi naannoorraa abdii dhabnee jirra" - Aanga'aa Mooyyalee